KNOPPO CO2 Laser Kucheka Engraving Machine MuSouth Africa
na admin pa 2021-11-14
Munguva pfupi yapfuura, 5 seti dzeKnoppo co2 laser yekucheka muchina wakasvika kuSouth Africa, nekuda kwemhando yakanaka, tinogara tichiwana mhinduro dzakanaka kubva kune mutengi. CO2 laser yekucheka michina inowanzo vimba nelaser simba kutyaira iyo laser chubhu kuburitsa mwenje. Inopfuudzwa kumusoro welaser, uye ...
Zvakanakira Fiber Laser Yekuchenesa Machine !
na admin pa 2021-11-02
Fiber laser yekuchenesa muchina - tekinoroji nyowani, yakakura application, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza Laser yekuchenesa muchina inogona kushandiswa kwete chete kuchenesa organic zvinosvibisa, asiwo kuchenesa inorganic zvinhu, zvinosanganisira simbi ngura, simbi zvimedu, guruva, nezvimwewo Zvishandiso zvayo zvinosanganisira: ngura remova ...
Maitiro Ekuita Yakadzika Engraving Pasimbi?
na admin pa 2021-10-20
Maitiro Ekuita Yakadzika Engraving Pasimbi? Vamwe vatengi vanoda kugadzira yakadzika yekunyora pane simbi zvikamu ne fiber laser yekumaka muchina. sevhiri remota , masaha , maturusi nemaspare parts etc . Kana iwe uchida kuita zvakadzika kunyora, chekutanga, iwe unofanirwa kusarudza angangoita 50w uye nediki yekumaka lens (70 * 70mm kana 100 * 1 ...
Zvimiro zveKNOPPO Fiber Laser Tube Yekucheka Machine
na admin pa 2021-10-13
KT6 Tube fiber laser yekucheka muchina wakagadzirirwa nyanzvi yekucheka chubhu, inotsigira kugadzirwa kwechubhu uye chimiro chechimiro chakasiyana. Inoshanda neTubepro software seamless kuona tekinoroji yekumisikidza, advanced toolpath chizvarwa uye nesting yeyakajairwa uye yakakosha yekugadzira inodiwa. Saka manje...
4KW ~ 30KW Fiber Laser Kucheka Muchina Une Nzvimbo Yakakura Yekucheka
na admin pa 2021-10-08
Fiber laser yekucheka muchina ine hombe yekucheka nzvimbo haina kufanana nechero imwe flat sheet yekucheka system pamusika. Muchina uyu wakagadzirirwa hukuru hwemashizha saizi uye yakanyanya kugadzirwa. Iyo hombe shizha fomati kugona kunoita kuti muchina ucheke nhamba huru yezvimedu zvebasa mutete uye ...
Auto-loading Module For Fiber Laser Kucheka Machine
na admin pa 2021-09-24
Iyo auto-kurodha module inogona kupa mhinduro kurodha sheet simbi pane fiber laser yekucheka michina, chengetedza nguva yekushanda uye basa. Hedzino mamwe mashoko , chero anofarira , tapota taura nesu . 1. Automatic LoadingFully automated one-click loading and processing inovimbisa kuwedzera kwe20% ...
Nei KP3015 fiber laser yekucheka muchina yakakurumbira muEurope!
na admin pa 2021-09-16
KP3015 fiber laser yekucheka muchina vakachinjana tafura uye chivharo chekudzivirira, chakakodzera kuEuropean CE zviyero, saka ndezvipi zvimwe zvinhu? Bata skrini Muchina unoshandisa Ul dhizaini iyo inoita kuti iratidze kupindura patafura yekugadzirisa, ichiita kuti kugadzirisa kuwedzere kunzwisisika. Elegant curves anokwana mac...
KF3015T Metal Sheet Uye Tube Fiber Laser Cutter Inotengeswa kunze
na admin pa 2021-09-10
KNOPPO KF3015T Metal Sheet Uye Tube Fiber Laser Cutter inotengeswa kunze. KF-T mbiri inoshandisa fiber laser yekucheka muchina inogona kucheka simbi pepa uye chubhu, shizha yekucheka nzvimbo ndeye 3000 * 1500mm, 6000 * 1500mm uye imwe sarudzo, chubhu yekucheka kureba ndeye 3m kana 6m. Uye zvikamu zvakawanda zvakasara zvinobva kune yakakurumbira brand...
CNC Plamsa Pipe Yekucheka Muchina MuSimbi Yakarongeka Indasitiri
na admin pa 2021-08-18
CNC Plamsa Pipe Yekucheka Machine inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yesimbi. Wese munhu anoziva kuti kune akawanda anopindirana makomba makomba uye inopindirana mutsara wekupedzisira kugadzirisa zvinodiwa muindasitiri yesimbi. Knoppo otomatiki CNC plasma pombi yekucheka muchina unonyanya kushandiswa kuH danda, ini ...
na admin pa 2021-08-17
Fiber laser yekumaka muchina inoumbwa nefiber laser sosi, scanning galvanometer, control board, lens uye cabinet yekubatsira kumaka michina. Fiber sekuwana yepakati nefiber laser, kunatsiridza iyo imwe chete photoelectric shanduko chiyero uye mwenje, iyo resonant mhango ye laser sosi inowedzera ...
Fiber Laser Kucheka VS Plasma Kucheka
na admin pa 2021-08-06
Fiber Laser Kucheka VS Plasma Kucheka KNOPPO laser anga aine makore gumi nemanomwe ruzivo rweCNC simbi yekucheka muchina, vazhinji veplasma yekucheka mutengi vanotanga kusarudza fiber laser yekucheka muchina izvozvi. Knoppo fiber laser muchina unobatsira mutengi kuwana akawanda uye akawanda maodha nekuda kweiyo yakanaka yekucheka nzvimbo uye pre...
KP1510 2000W Diki Fiber Laser Kucheka Machine MuRussia !
na admin pa 2021-07-28
KNOPPO KP1510 2000W diki fiber laser yekucheka muchina inobudirira kutakurwa uye kutumirwa kuRussia. Iyi diki fiber laser yekucheka muchina ishoma muhukuru, yakawanda mukuchinjika, Diki yakagarwa nzvimbo inoyera dziviriro yakakwana uye kuchengetedzwa kwepamusoro. Uyewo shandisa zvakanaka spare parts kubva kune yakakurumbira brand, g...